isayithi lakho le-e-commerce - i-Amazon, i-Ebay, i-Allegro ne-Etsy ene-Propar E-export
Propars E-Commerce Ukuhlanganiswa
Phatha izimakethe zasekhaya nezamazwe aphesheya kusuka kusayithi lakho le-e-commerce ngePropars
Imikhiqizo / Ama-oda ezentengiselwano
Kulula kakhulu ukuthumela nge-imeyili kusuka kusayithi lakho le-e-commerce ngePropars!
Zonke izitoko zilandelwa ngokuzenzakalela. Izinguquko zamanani nezesitoko ziboniswa khona manjalo.
Ungadlulisa imikhiqizo yakho kusayithi lakho le-e-commerce liye kwaPropars ngeXML.
Ngokwesakhiwo sesigaba sakho se-e-commerce, ungavula imikhiqizo yakho oyithengisayo ezimakethe.
Ngezibuyekezo ezizenzakalelayo, imikhiqizo esanda kufakwa kusayithi lakho le-e-commerce ibonakala ku-Propars, futhi izitolo zakho kanye namasheya akho emakethe ayavuselelwa.
Ungenza ushintsho lwesitoko nentengo ngokugcina isayithi lakho le-e-commerce lisesikhathini.
Ukushintsha kwentengo okwenzayo kusayithi lakho le-e-commerce kubonakala ngokushesha emakethe lapho umkhiqizo uthengiswa khona.
Ngesisombululo sePropars e-export, ungathumela nge-imeyili kusuka kusayithi lakho le-e-commerce.
Phatha i-e-commerce esikrinini esisodwa ngokuhlanganiswa kwezimakethe zePropars
Qoqa wonke ama-oda akho esikrinini esisodwa, i-invoyisi ngokuchofoza okukodwa! Ingakhipha ama-invoyisi ngenqwaba yama-oda avela ezindaweni zemakethe kanye nesayithi le-e-commerce; Ungaphrinta ifomu lempahla eyinqwaba.